Maalinta: Diseembar 25, 2018
Agaasime Goboleedka TCDD 4 Tirada Gaadiidka iyo Calaamadaha Macluumaadka ee Heerka Isuduwaha Sivas - Khadka Samsun. Adeegga Iibsiga Gobolka iyo Koontaroolada [More ...]
2019 Sanadka Mushaharka Ugu Yar Oo Lagu Sifeeyay
Guddiga Baadhista Mushaharka ee Ugu Yar, oo ka kooban wakiilo ka socda shaqaalaha, loo shaqeeyaha iyo dawladda, ayaa go'aamin doona mushaharka ugu yar ee lagu ansaxin karo 2019. 25 maalinta Salaasada 2018: 10 ee Wasaaradda Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada [More ...]
Xarunta Casriga ee Basaska Dadweynaha ee Van
Dawlada Hoose ee Magaalada Caasimadda ah ee loo yaqaan (Metro Metroitanitan District) oo ah goobta laga baxo ee Baska Dadweynaha ee Gaarka loo leeyahay ayaa si buuxda u qalabaysan dhaqdhaqaaqa. Guddoomiyaha degmada İpekyolu Mithat bey Xaafadda Çavuşbaşı oo ku taal waddada Basaska Dadweynaha Gaarka loo leeyahay ayaa guuraya [More ...]
Eskişehir Wadiiqada Wadada Wadada ee laga bilaabay Inönü
Dawlada Hoose ee Magaalada Eski Metroehir waxay ku burburtay garoon cusub oo ku yaal Eskişehir iyadoo la adeegsaday waddo la taaban karo. Maaddaama alaabada loo adeegsado marinnada waddada dhinaceeda ay ka timid dibedda iyadoo leh lacag ajnabi oo qaali ah, ayaa loo yaqaan 'Bel Concrete Road tarafından' oo ay leedahay Dawladda Hoose ee Magaaladda. [More ...]
28 Kilometer Wadada Baaskiilka ee Konyaalti ilaa Lara
Shaqadu waxay ka bilaabatay Mashruuca Baaskiilka Wadada ee Antalya Metropolitan Municipal kaas oo marin u siinaya wadida baaskiil wadista ee udhaxeysa Lara iyo Konyaaltı. Mashruucan, dadka deggan Antalya waxay awoodi doonaan inay si nabad ah uga soo baxaan Konyaalti ilaa Lara iyagoo adeegsanaya kiiloomitir 28 kiiloomitir. Metropolitan [More ...]
Astfaltii ugu horreeyay ee Antalya ayaa lagu daboolay Döşemealtı Dereli
Ku sii wadista barta adeegga si joogto ah illaa Dawladda Hoose, adoo saxeexaya kan ugu horreeya Antalya, degmada Dosemealti ee degmada Dereli dalab asphalt ah ayaa la hirgaliyay. Haddii dalabka lagu guuleysto, dusha sare ee la taaban karo ayaa loo isticmaali doonaa dhammaan degmooyinka. [More ...]
Halganka Jabhadda Xoreynta Fatma Seher Kara Fatma overpass ayaa la furay
Halyeeyga Dagaalkii Madax-bannaanida Fatma Seher Kara Fatma Xadgudubka La Furay: Marka lagu daro kaabayaasha iyo shaqooyinka qaab dhismeedka cusub ee Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, magaaladu waxay noqotey mid casri ah iyadoo dumineysa xad-gudubyadii hore iyo kuwa cusub. [More ...]
IZBAN Expeditions Expedited Fully!
Duulimaadyada IZBAN (Nidaamka Suburban ee Izmir) ayaa gabi ahaanba joogsaday Izmir. Waxaa jiray shaqo joojin ka dhacday İZBAN maalmo 15 laakiin duulimaadyo dheeri ah ayaa la sameeyay. Demiryol-İş Izmir Branch ayaa ku eedeeyay shaqo joojinta ka jirta İZBAN inay jabtay iyo adeegyo dheeraad ah oo tareen ah. [More ...]
Joojinta socodka IZBAN
Shaqo joojinta, oo bilawday bishii Luulyo wadahadalka gorgortanka wada jir ah ee İZBAN, wuxuu bilaabmay markii shaqaaluhu ku heshiin waayeen maamulka İZBAN oo ay galeen maalintii 16. Ururka Shaqaalaha Tareenka Waddada Izmir Laanta Izmir Suburban Transportation Inc. (IZBAN) way socotaa [More ...]
Waxay ahayd mid ka mid ah maalmihii ugu halista badnaa Dagaalkii Madax-bannaanida. Qaranka Turkiga wuxuu ahaa hal talaabo oo ka dambeysa nolosha nolosha iyo dagaalka. Behiç Bey, oo qaatay mas'uuliyadda wadooyinka tareenka ee dagaalka, ayaa helay telegram. Soo diraha waa Atatürk: hızlandır Dardargelinta shixnadda; tareenka ugu dambeeyay [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, khadka tareenka xawaaraha dheereeya ee Ankara-Bursa ayaa la dhammeystiri doonaa loona furi doonaa adeegga 2020'da Turhan, iyadoo dowladda ay gacan ka heleyso iyada oo wasaaraddu ay muddo sanado ah ahayd 16 shaqo aan kala go ’lahayn oo dalka iyo dadka u horseedaysa. [More ...]
Waayo, qarnigii badan iyo hawlaha gaari qaranka ugu horeysay ee Eskisehir "Revolution" kaas oo sidoo kale soo saartaa Hybrid Qaranka tareenka Turkey tareenka iyo Engine Industry Inc. (TÜLOMSAŞ) ee hooras iyo 1000 qoyska [More ...]
TÜDEMSAŞ Waxay u socotaa Sivas, Gudoomiyaha Deegaanka
Pek Sivas wuxuu joogsaday magaaladii tareenka, Abdullah ayaa yidhi Abdullah Peker, Guddoomiyaha Xawaaladda Gaadiidka iyo Shaqaalaha Tareenka. Hogaamiyaha UDEM HAK-SEN Abdullah Peker ayaa qoraal ku sheegay: Sivas Sanadihii lasoo dhaafay Sivas Railway City [More ...]
6 Cusbooneysiinta Cusub ee loo yaqaan "Akçaray Tram Line"
Mashruuca ugu weyn ee 4, oo ay wado Kocaeli Metropolitan Municipal, ayaa la soo gabagabeyn doonaa waxaana la gelin doonaa adeegga saddexda bilood ee hore ee sanadka cusub. Mashruuca Köseköy Köprülü Soogalootiga (biyo-baxa) waa bisha koowaad ee sanadka cusub ee Janaayo, Değirmendere Yüzbaşılar Köprülü [More ...]